Madaxweynaha dalka oo soo saaray amarro la xariira amniga – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweynaha dalka oo soo saaray amarro la xariira amniga
Waxaa maalinkii labaad ismaamulka Mombasa ee gobolka xeebta ka socdo kulan diiradda lagu saarayo sugidda ammaanka wadanka.
Shirka ayaa waxaa maanta ka qeyb galay taliyaasha cusub ee booliska ee maamul goboleedyada kadib markii abaanduulaha booliska Mr. Joseph Boinnet uu shalay shaaciyay iskushaandheyn uu sameeyay.
Madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta oo khudbad ka jeedinayay Mombasa ayaa madaxda amniga u sheegay inay mas’uuliyad ka saarantahay oo lagula xisaabtamayo gudashada wajibaadkooda.
Waxaa uu khudbadiisa ku billaabay in muddo hal daqiiqo ah ay istagaan ciidamada kulanka ka qeyb galaya oo ay aamusaan si loo xasuusto dadkii ku nafwaayay weerarkii Dusit.
Madaxweynaha ayaa mar kale ku nuuxnuuxsaday in la baacsanayo, ciqaab adagna la marinayo cid waliba oo maalgelisay, soo qorsheysay ama ku lug lahayd weerarkii talaadadii hore ka dhacay Nairobi.
Waxaa uu hoosta ka xariiqay in dowladda ay ka go’antahay in tallaabo adag laga qaado kenyaanka laga dhaadhiciyay fikradaha khaldan ee xagjirnimada iyo kooxaha afkaartaasi faafinaya labaduba.
Waxaa uu saraakiisha ammaanka kula taliyay inaynan marnaba cidna u ogolaan in loo cagajugleeyo ama gudashada shaqadooda laga hor istaago.
Abaanduulaha booliska dalka Mr. Joseph Boinnet ayaa mid mid ugu dhawaaqay magacyada taliyayaasha la soo magacaabay isagoo madaxweynaha ku wargeliyay xilka uu mid waliba qabanayo.
Farxaan Cali Mukhtaar ayaa si dhow ula socday khudbadda madaxweynaha waxaa uuna soo koobaya arrimaha uu ku soo qaatay oo amarro u badnaa.
Shalay ayay ahayd markii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Dr. Fred Matiangi uu sheegay in guud ahaan wadanka laga billaabayo howlgalo dowladda ay kula wareegeyso hubka sharci darrada ah ee loo adeegsado weerarrada ama falal dambiyeedyada.
Wasiirka ayaa ballanqaaday inay sameynayaan wax waliba oo karaankooda ah si loo sugo ammaanka dalka.
Dhanka kale ammaanka Ismaamulka Garissa ee gobolka waqooyi bari ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoo ay kulan qaadanayaan guddoomiyaha dowladda dhexe u qaabilsan maamul goboleedkaasi, ku xigeenadiisa iyo guddoomiyaasha xaafadaha ee loo yaqaano jiifafka .
Guddoomiye xaafadeedka Waberi oo ka tirsan Garissa, Yuusuf Sheekh ayaa faahfaahin ka bixinaya caqabadaha dhanka ammaanka ah ee jira iyo waxyaabaha laga faaiiday nidaamka Nyumba Kumi
Dhanka kale afhayeenka booliska Mr. Charles Owino ayaa sheegay in dadkii ka shaqeynayay dhismaha Dusit ee la weeraray toddobaadkii hore ama martidii halkaasi ku sugnayd laga billaabo maanta loo ogolaanayo inay soo qaataan baabuurtii ay ka tageen ama loo diiday inay kaxeyaan kadib markii uu weerarka dhacay.
Waxaa aagga loo yaqaano Riverside tagay muuliilayaasha dukaamaha iyo guud ahaan ganacsatada ka shaqeysanayay goobta la weeraray oo ay isla maalinkaasiba ciidamada ammanka xireen dadweynahana ka hor istageen inay gudaha u galaan.
Ilaa iyo hadda ugu yaraan 10 eedeysanayaal ah ayaa maxkamadda la soo taagay waxaana xabsiyada lagu heynayaa muddo 30 maalmood ah oo baaritaanada ka dhanka ah lagu soo gabagabeynayo.
Sido kale laamaha ammaanka ee dalka ayaa ismaamulada kala duwan ka wado howlgalo ay ku bartilmaameedsanayaan dadka lala xariiriyay dhacdadaasi ay ku dhinteen 21 qof ee ay mas’uuliyadeeda sheegatay xarakada Al-shabaab.
← Dowlada Soomaaliya oo ka hadashay ganacsatada lacaga siiya Al-SHabaab.
215 macalimiin ah oo doonaya inaan laga wareejin xarumaha ay ka shaqeyaan →